Fihla impandla - Amathiphu asebenzayo angcono kakhulu | Bezzia
Ukulahlekelwa izinwele kungenye yezinkinga abantu abaningi ababhekana nazo. Kungakho kunezinketho eziningi futhi eziningi okufanele sikwazi ukuzenza fihla impandla ngendlela ephathekayo nokuthi kukhombisa okuncane. Ukubonana futhi ngezinwele futhi yinto ehlala ikhulisa ukuzethemba futhi namhlanje sizokufeza.
Noma kunjalo i-alopecia ivame kakhulu kubo kunakuzo, Kuyiqiniso ukuthi kungaba nezimbangela ezahlukahlukene zokuthi kungani kumele sibhekane nakho. Ngakho-ke, kungcono njalo ukubanjwa nezixazululo esezikhona. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi imayelana nani?
1 Fihla impandla: Ukugunda izinwele okusha
2 Ama-microfibers ama-capillary
4 Olayini abancane
5 Ukwakheka kwezinwele
Fihla impandla: Ukugunda izinwele okusha
Noma kubukeka sengathi kuyaphikisana, akunjalo. Ngoba uma sikhuluma ngokulahleka kwezinwele, kuyiqiniso ukuthi akwenzeki njalo kuzo zonke izindawo ngokulinganayo. Lokhu kubangela ukuthi ukungena kungene kujule kancane noma mhlawumbe ngaphezulu kwekhanda noma 'umqhele'. Ngakho-ke, akukho okufana nokuzama ukwenza izinwele ezintsha ezingaphezulu. Ukusikwa ngevolumu, ngezendlalelo nangama-bangs lapho kungenzeka khona, kuyindlela enhle. Ivolumu yezinwele ezimfishane futhi iyaluleka, ngoba izokwenza lowo mphumela wokukhanya wokuba nezinwele eziningi.
Ikakhulukazi uma sikhuluma ngezinwele ezimfishane, lesi ngesinye sezixazululo ezinhle kakhulu. Ingesinye salezo zixazululo ezisheshayo ezisishiya nomphumela obaluleke impela. Singakusho lokho Luhlobo lwe-powder olwenziwe nge-keratin futhi nalo elizonamathela, ngakho-ke kulula ukuzibeka. Kuyiqiniso ukuthi kuyohlale kunemikhiqizo yokulungisa, efana nesifutho, ezoqinisekisa ukuthi ihlala unwele, ikakhulukazi uma kunomoya omncane noma ufuna ukuyigqoka isikhathi eside. Kungcono ukubonisana nochwepheshe ngoba uma uyisebenzisa kaningi, kungakunika isiphetho esinamafutha ezinweleni zakho. Yisixazululo sesikhashana esifanele ukukubona futhi ngezinwele.
Lapho namanje singenakho ukulahleka kwezinwele okumenyezelwe kahle, singahlala sisebenzisa izandiso. Ikakhulu ngoba zilungele ukukwazi ukufihla izinwele ezinhle kakhulu futhi sizinikeze isiphetho semvelo futhi esinamandla kakhulu, njengoba sithanda. Njengoba wazi kahle, kunezinhlobo eziningi zezandiso ongazithola. Ezinye zazo zingagqokwa isikhathi eside kanti ezinye zizofakwa noma zisuswe ngohlobo lwe-hairpin.
Ngokubanzi, kuyiqiniso ukuthi lokho okubizwa ngokuthi yimigqa emincane kusetshenziselwa ukunikeza ukuthinta kwevolumu engxenyeni engenhla yekhanda. Ukuze kungabonakali ukuthi kukhona ukulahleka kwezinwele. Njengoba lokhu futhi kuyinjongo yenketho engokwemvelo njengalena esikhuluma ngayo ngalesi sikhathi. Ngaphezu kokufihla impandla, futhi kufanele sisho ukuthi ungayigqoka amasonto noma izinyanga, ngakho-ke ingenye yezinzuzo zayo ezinkulu kunezinye izixazululo. Ukuze wenze lokhu, kufanele ubuze esaluni yakho ejwayelekile yobuhle futhi uzowujabulela umphumela ngoba ngisho nomoya ngeke ukwazi ngawo.
Ngezikhathi ezithile kuphela, sinayo i- izimonyo zezinwele. Lokhu kwenza kube kuhle ukufihla lowo 'mqhele' noma wenze izimpande zikhulise kancane, okuholela ekutheni sizibone sinezinwele eziningi noma sithi ukuvalela impandla. Namuhla sinezinketho eziningana, kusuka kulabo abafakwa ngesiponji esimanzi njengokungathi ubuso bezimonyo, ukufafaza ama-finishes. Kukhona yonke imibala, ngakho-ke akunzima ukukhetha eyakho futhi nayo ithengiswa ezitolo ezinkulu, kanye nodayi. Iyiphi inketho ongayikhetha?
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » Ubuhle » Amathiphu awusizo wokufihla impandla okufanele ukwazi